Maxkamada ku taal dalka Malawi oo xabsi ka siidaysay 200 qof oo Soomaali & Itoobiyana – SBC
Maxkamada ku taal dalka Malawi oo xabsi ka siidaysay 200 qof oo Soomaali & Itoobiyana
Maxkamad ku taal wadanka Malawi ayaa ooda ka qaaday oo xukuntey in xabsiga laga siidaayo 200 oo qof oo Muhaajiriin u dhashay wadamada Soomaaliya & Kenya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay wadankaasi ku galeen sharci daro.
Dadkan ayaa mudo afar bilood ah ku jirey xabsi, waxaana la sheegay inay doonayeen qaxootinimo ama magangalyo siyaasadeed, sida ay sheegtey maxkamadau.
Qaadiga maxkamada sare ee wadanka Malawi ee go’aankaasi riday ayaa sheegay in aanay u kala saari karin dadkaasi qaxootinimo & dad sharciga ku xad gudbay, waxaana uu sheegay in iyadoo maxkamadu cuskanayso xaaladaha ka jira wadamada dadkan ay sheegteen ee Soomaaliya & Itoobiya inay go’aan ku gaareen in la siidaayo.
Dingiswayo Madise oo ah Qaadiga maxkamadamagaalada Mzuzu ayaa sheegay in Soomaaliya gabi ahaanba xaalada ka jirta ay tahay mid colaadeed, isla markaana Itoobiya qaybo ka mid ah ay ka jirto xaalad ay dadku dhibaato ku qabaan, sidaasi darteed dadka ka yimaada wadamadaasi loola dhaqmo si ku dhisan xuquuqul Isnaanka caalamiga ah.
Madise ma sheegin 200 ee qof inta Soomaali ah ama inta Itoobiyaan ah, waxaana dawlada wadankiisa uga digey inay inta aanay dadka ajaanibta ah ee doonaya magangalyada xirin inay maxkamada u soo gudbiso si ay u kala cadeyso qofka ramsiga ah ee qaxootiga ah iyo kan sharci darada wadanka ku soo gala.